पुरुषले गो’प्य अङ्गको तस्वीर पठाएपछि महिलाले यस्तो जवाफ दिइन् जस्ले युवकले बमिट गरे ! – PathivaraOnline
Home > गसिप > पुरुषले गो’प्य अङ्गको तस्वीर पठाएपछि महिलाले यस्तो जवाफ दिइन् जस्ले युवकले बमिट गरे !
पुरुषले गो’प्य अङ्गको तस्वीर पठाएपछि महिलाले यस्तो जवाफ दिइन् जस्ले युवकले बमिट गरे !
admin October 31, 2019 गसिप, जीवनशैली	0
एउटी महिलालाई अपरिचित पुरुषले आफ्नो गो’प्य अङ्गको तस्वीर पठाए । महिलाले यस्तो जवाफ दिइन् कि त्यो सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल बन्यो । मानिसहरुले यी महिलाको बहादुरी र मुखभरीको जवाफ दिएकोमा स्याबासी दिइरहेका छन् । बेलायतकी समान्ताले म्यानचेस्टरमा एउटा रेष्टुराँका रिभ्यु फेसबुक फोस्ट गरिन्, जसपछि एक जना अनजान पुरुषले कमेन्ट गरे–आफ्नो इनबक्स चेक गर । जब इनबक्स चेक गरिन चकित परिन् ।
जसै समान्ताले इनबक्स चेक गरिन् तब त्यहाँ आफूलाई जेम्स बताउने व्यक्तिले आफ्नो गो’प्य अङ्गको तस्वीर समान्तालाई पठाएका थिए । समान्ताले बीबीसीसँगको कुराकानीमा भनिन्–पहिला त मैले सोचेँ कि यस्तो हरकत गर्नेलाई नजरअन्दाज गरुँ, जस्तो कि हामी महिलालाई सबै सिकाइने गर्दछ । तर फेरि मैले सोचेँ कि यिनको सामना गर्नैपर्छ र मैले उक्त व्यक्तिको हर्कत सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेँ ।
समान्ताले उक्त व्यक्तिलाई जवाफमा गो’प्य अङ्गको कयौ प्रकारका तस्वीर पठाउन सुरु गरिन् । जसमा कयौ रंगिन र गो’प्य अङ्गकोको कार्टुनसमेत थियो । समान्ताले जब यसप्रकारको तस्वीर जेम्सलाई पठाइन् तब जेम्सले जवाफ दिए–अब भयो, मलाई बमिट गर्न मन लागिसक्यो ।
उनले समान्तालाई फेरि एउटा सन्देश पठाए–मैले जुन सन्देश पठाएँ, कृपया त्यसलाई सार्वजनिक नगर्नुहोला । बीबीसीसँग कुरा गर्दै समान्ताले भनिन्–म सबै युवालाई बताउन चाहन्छु कि हरेक युवती यस्तो हर्कत चुपचाप सहदैनन् । तपाईलाई अर्कोपटक सार्वजनिक रुपमा बे’इज्जत गरिनेछ । समान्ताले यो पूरा घटना फेसबुकमा पोष्ट गरिन् जसलाई धेरैले शेयर गरेका छन् । एजेन्सी
सत्ताको आडमा मच्चियो राजधानीमै कम्युनिस्ट ‘आत ङ्क’ ! कांग्रेस नेतामाथि म रणासन्न कु टपि ट
कृष्ण वलीकै जस्तो व्यथा भएका रमेशकाे यस्तो सहास! संसारलाई चकित पार्दै विदेशमा समेत नाम राख्दै… भिडियोमै हेर्नुहाेस्